Samachar Batika || News from Nepal » के फेरि होला लकडाउन ? डाक्टरहरुले दिए यस्तो सुझाव !
काठमाडौं : कोरोना भा’इरस सं’क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले ठीक एक वर्षअघि चैत ११ देखि एक साताका लागि लकडाउन गरेको थियो। तर, त्यसको अवधि थपिँदै लगिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना सं’क्रमण बढ्न थालेसँगै नेपालमा त्रा’स बढेको छ। धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘नेपालमा के होला ?’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी गत वर्षझैं लकडाउन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘कार्यालय, विद्यालय, कलकारखाना र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिफ्टअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ’, निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर जनस्वास्थ्य मापद’ण्ड पालना गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार नयाँ सं’क्रमित मात्र होइन, खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि पुनः सं’क्रमण देखिएको छ। ‘खोप लगाउँदैमा शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन। सं’क्रमण हुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना कायमै हुन्छ’, उनी भन्छन्।
गत वर्ष हवाई मार्ग र स्थल मार्ग भएर नेपाल आउनेलाई गरिएको ‘फरक मापद’ण्ड’ले लकडाउनको अवस्थामा पुर्‍याएको विज्ञको भनाइ छ। तेस्रो र दोस्रो लहरको मा’र खे’पिरहेका मुलुकबाट स्वदेश छिर्नेलाई गत वर्षको गल्ती नदोहोर्‍याई समान मापद’ण्ड कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
‘गत वर्ष विकसित मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेको पीसीआर रिपो’र्ट अनिवार्य गरियो। भारतबाट घर फर्कनेलाई पीसीआर रि’पोर्टबिना हुरुरु छिर्न दिइयो। घर पठाइयो’, जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘यही दोहोरो मापद’ण्डले कोरोना सं’क्रमण बढ्यो। लकडाउन घोषणाको अवस्था आयो।’
कोरोना सं’क्रमणको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जो’खिम उस्तै छ। भारतमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी सं’क्रमित हुन पुगेका छन्। सवा लाखमा झरेको सक्रिय सं’क्रमितको संख्या झन्डै चार लाख पुगेको छ। नेपाल–भारत नाकाबाट निर्बाध आवतजावत भइरहेको छ। कोरोना सं’क्रमणलाई देखाएर लकडाउन घोषणा गर्न नहुने डा. मरासिनी बताउँछन्। विगतको गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।’
प्रकाशित मिति ११ चैत्र २०७७, बुधबार ०२:४०